सहिद रङ्गशाला Info. About. What's This?
ⓘ सहिद रङ्गशाला
यो रङ्गशालामा दर्शकहरूलाई धेरै सुविधाहरू दिइएको छ । भित्र आउन र बाहिर जानको लागि मुख्य ३ वटा ढोकाहरू रहेका छन् । दर्शकहरूको लागि विशेष बस्ने ठाउँको पनि व्यावस्था गरिएको छ । यसमा एकैचोटिमा १०,००० दर्शकहरूको क्षमता रहेको छ । यो रङ्गशाला भित्र सौर्य बत्तीहरू जडान गरिएको छ जसले रातीको बेलामा प्रकस्ट दृश्य देखिन्छ । जमीन सुरक्षाको लागि सबै तिरबाट काँडेतारले घेरिएको छ । पार्किङ प्रणालीको त्यहाँ राम्रो व्यवस्था रहेको छ जहाँ धेरै गाडीहरू एकैचोटि पार्क गर्न सकिन्छ। टेनिस कोर्ट साथै घेरिएको ठूलो कोठा, रङ्गशालासँग जोडिएको छ । विराट गोल्डकपको बेलामा आयोजक द्वारा अस्थायी रात्रिबत्ती जडान गरिएको थियोे । बिराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सङ्ख्या १ को सरकारले एक वर्ष भित्र स्थायी रात्रिबत्ती जडान गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो । यस रंगशालामा पाँचौ साफ महिला च्याम्पियनसिप अगाडि खेलाडी चेन्जिङ् रुम, खेलाडी आराम कक्ष,खेलका दौरान पत्रकारका लागि छुट्टै सम्मेलन कक्षमिडिया सेन्टर निर्माण गरिएको छ।
यस रङ्गशालामा महेन्द्रनगर गोल्डकप हाल विराट गोल्डकपको आयोजना पहिलो पटक सन् १९६१ मा भएको थियो । यस रङ्गशालामा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन समारोहको कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो जसलाई नेपालकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
3. आयोजित मुख्य प्रतियोगिताहरू
रेडबुल राष्ट्रिय लिग
Wikipedia: सहिद रङ्गशाला